Couscous pamwe nemadomasi nemaorivhi matema | Kicheni Mapepa
Maria vazquez | 21/08/2021 10:00 | Pasita
Ichi ndicho chimwe cheavo mapepeti akareruka ekugadzirira Iyo iwe yaunogona kutendeukira kune iyo pausinganzwe kuda kubika. Iwo mukoma pamwe nemadomasi uye maorivhi matema akagadzirwa mumaminitsi mashanu. Ehe, iwe unoverenga chaizvo. Iyo yekubatsira inobatsira yemazuva ano ezhizha kana iwe uchinzwa sekunge kupinda mukicheni.
Madomasi ava mumwaka. Kudya madomasi akanaka hakusi nyore zvachose mukati megore rakasara so isu tinofanirwa kutora mukana izvozvi kuti zviri nyore kuzviwana mumisika. Pamusoro petamato, ini ndawedzera mozzarella chizi uye mamwe maorivhi kune kamukira iwe yaunogona kutsiva nezvimwe zvinoshandiswa.
Ndezvipi zvigadzirwa zvauri kushamisika nezvazvo? Kune mamwe maonde akaomeswa kana anchovies, semuenzaniso. Iyo yekutanga ichawedzera kutapira kubata kune mukoma nemukaka wemasanganiswa uye iyo yekupedzisira ichawedzera munyu unobata. Zvakare, ndinokukurudzira kuti unakidze hama yemukoma nezvinonhuwira zvako zvaunofarira.
Iwo makuseni nemadomasi nemaorivhi matema ayo atinogadzirira nhasi anobatsira zvikuru. Chikafu chinokurumidza kugadzirira, chakakwana kana pasina nguva kana chishuwo chekubika.
Nguva yekugadzirira: 2 M
Nguva yakazara: 7 M
½ mukombe ushamwari hwekuseni
½ mukombe wemuriwo muto wekuseni
Tomato 1 yakaibva
1 bhora re mozzarella
Isu tinodziya mvura nechinoti munyu, mhiripiri uye oregano. Kana yatanga kubika, wedzera mukoma, kumutsa, kufukidza pani uye kudzima moto.
Isu tinobika hama kwemaminitsi mana kana nguva yakatarwa nemugadziri.
Ipapo tinowedzera teaspoon yemafuta uye tinorega tichienda neine isu tine zviyo.
Isu tinopatsanura mukoma nemukoma pamahwendefa maviri uye isu tinofukidza netetepa dzakatetepa.
Ipapo tinowedzera maorivhi uye cheki yakachekwa.
Isu munyu uye mhiripiri, tinopfeka nemadiridziro emafuta uye tinonakirwa necouscous iyi nemadomasi nemaorivhi matema.
Yakazara nzira kuchinyorwa: kudzidziswa » Zvidyo » Pasita » Couscous pamwe nemadomasi nemaorivhi matema